Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Gudoonka Barlamaanka oo manta isdiiwangalinaya | Somali National Television - sntv.so
Home GOLAHA SHACABKA Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Gudoonka Barlamaanka oo manta isdiiwangalinaya
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Gudoonka Barlamaanka oo manta isdiiwangalinaya
Baarlamaanka Soomaaliya maanta oo isniin ah waxaa bilaabanaya is diiwaan gelinta Musharaxiinta u tartamaya Xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Is diiwaangelinta Musharaxiinta ayaa waxa ay soconeysaa 23-ka April oo maanta ku beegan ilaa 24-ka April oo berri tallaado ah, waxaana watiga shaqada uu yahay 10:00-AM ilaa 05:00-PM sida lagu sheegay warqadda ay soo saareen Guddiga qaban qaabada doorashada.
Sidoo kale,Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo shalay kullankooda 2-aad ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa waxay soo saareen Jadwalka doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ay dhaceyso 30-ka bishan April 2018-ka.
Ugu danbeyntii Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa faray musharaxiinta u tartaramaya xilkan kana mid Golaha Wasiirada in Guddiga qaban qaabada u keenaan cadeyn ku xusan iscasilaadiisa markii uu is diiwaangelinayo.
Previous articleShirka Badqabka Suxufiga oo lagu soo gabagabeyay Muqdisho
Next articleKheyre: “Waxaan diyaar u nahay in aan fulino balanta idinka qaadnay”.